धनकुटा र झापा सेमिफाईनलमा – Dhankuta News : Daily Online News From Nepal
२०७६, ४ माघ शनिबार २१:१३
धनकुटा माघ ४ । धनकुटामा संचालन भैरहेको सहिद रामकृष्ण श्रेष्ठ १ नं. प्रदेशस्तरीय महिला फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत आज दुई खेल सम्पन्न भएको छ । सम्पन्न पहिलो खेलमा धनकुटाले इलामलाई र दोस्रो खेलमा झापाले पाँचथरलाई पराजित गर्दै सेमिफाईनमा प्रवेश गरेको छ ।
प्रतियोगिताको पहिलो खेल धनकुटा इलाम वीच भएको थियो । सो खेलमा निर्धारित समयमा वरावरी भएपछि ट्राईबेकरबाट निर्णय भएको थियो । ट्राईबेकरमा ४ गोलको विरुद्ध पाँच गोल गर्दै धनकुटा सेफिाईनलमा प्रवेश गरेको छ । यस्तै दोस्रो खेलमा झापाले पाँचथरलाई शून्यका विरुद ३ गोल गर्दै झापा सेमिफाईनमा प्रवेश गरेको धनकुटा जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष गोविन्द राईले जानकारी दिए ।
सो प्रतियिोगिताको आज भएको दुवै खेलमा ओमेन अफ दी म्याचको प्रयोजन गरेका धनकुटा इन्स्टिच्यूट अफ हेल्थ साईन्सका प्रवन्ध निर्देशक राम नारायण प्रसाद रामाले गरेका थिए । प्रतियोगितामा ओमेन अफ द म्याच भएकी खेलाडीहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा.कृष्णबहादुर घिमिरे प्रायोजक रामा र प्रतिष्ठानका अध्यक्ष इश्वरबहादुर श्रेष्ठ नगद पुरस्कार वितरण गरेका थिए यस्तै उनीहरुलाईसमितिका संयोजक विजयसन्तोषी राईलगायतले सम्मान गरेका थिए ।
प्रतियोगिताका पहिलो खेलमा धनकुटाकी विपना राई र दोस्रो खेलमा झापाकी जर्सी नं. ११ की सम्झना लावती ओमेन अफ दी म्याच घोषित भएकी प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष सत्यनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।